Nosy Pigeon ~ Journey-Assist - nosy Pigeon. Photo. Ahoana no hahatongavana any.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Nosy Pigeon
Nosy Pigeon, nosy Pigeon
11 martsa, 2020
Ny nosy Pigeon
Toeram-pihetsika any Pigeon
Fotoana tsara hitsidihana
Ahoana ny fomba hankanesana any amin'ny Nosy Pigeon
Wetter ny nosy + vinavina
Hevitra momba ny nosy Pigeon
Noho ny toetrany manan-danja, amoron-dranomasina fotsy, rano madio, lagoon tsara ary fauna anaty rano, ny nosy Pigeon dia nalaza tamin'ny fizahan-tany. Izy io dia fananganana voajanahary tsy manam-paharoa izay 15 km miala ny tanànan'i Trincomalee any Sri Lanka ary 250 km miala any Colombo.
Ny nosy dia ahitana havoana grite, amoron-dranomasina, farihy any atsinanana ary vatohara any amin'ny morontsiraka andrefana. Ny halavan'ny nosy Pigeon dia 200 m, ary ny sakany dia 100 m.Ny anarana avy amin'ny iray amin'ireo mponina volom-borona eo an-toerana - ny voromailala manga. Ireo vorona ireo dia manidina isan'andro isan'andro - amin'ny fiandohana sy amin'ny faran'ny andro.
Fotoana tsara indrindra mitsidika ny Nosy Pigeon
Ny fotoana tsara indrindra mitsidika an'i Pigeon dia manomboka amin'ny volana martsa ary mifarana amin'ny volana novambra. Mandritra ireo volana ireo dia tsy misy onja izay tena manakaiky ny morontsiraka, ary madio tanteraka ny rano (fahitana dia 35 m). Ny fitsidihana ny zaridainam-pirenena dia azo atao ihany koa amin'ny ririnina. Na dia mitsoka eto ny avaratra atsinanan'ny avaratra atsinanana, ny mpizahatany tonga any amin'ny nosy dia tsy mahatsapa fahasahiranana. Ny hafanana rivotra eto dia hita eny amin'ny laharana + 26 ... + 30.
Toe-javatra tokony hatao ao amin'ny Nosy Pigeon
Ny sata fitahirizana ny nosy ity dia raikitra tamin'ny 1963. Tamin'ny 2003, nomena ny sata mifehy ny zaridainam-pirenena izy. Any Sri Lanka kely dia maro ny valan-javaboary nasionaly amin'ny ankapobeny - 17 ihany koa anefa, ny 2 amin'izy ireo ihany no an-dranomasina. Pigeon no manana ny tsara indrindra amin'ireo sahan-dranomasina misy an'io firenena io.
Famonosana Pigeon sy Snorkeling
Afaka mahita karazana corals isan-karazany (amin'ny Pigeon, ny isan'ireo karazan-java-mahatratra 100), amin'ny alàlan'ny diving na snorkeling. Na izany aza, ny toetran'ity nosy ity dia tsy vitan'ny hoe mampiavaka ny haran-dranomasina. Manakaiky ny nosy dia misy karazana trondro haran-dranomasina 300 eo ho eo, ary koa ny stingrays, era moray, mollusks, crustaceans, sokatra telo (Bissa, oliva ary maintso), kintana. Izy io dia sokatra - sarin'ity nosy ity.
Mahagaga ny fahafantarana ny toetran'ny rano Pigeon, fa mampatahotra ihany koa. Mitaky herim-po izany, satria ny rano amoron-tsiraka dia notsidihin'ireo antsa roa - ny haran-dranomasina ary ny alina Malgash. Na izany aza, tena tsy tokony hatahotra azy ireo ianao, satria tsy dia mampidi-doza ny olona. Ny salan'isa dia 1 m monja ny halavan'ny trondro ireo - ka tonga hatrany amin'ny farany ambany dia afaka mahita ranomasina urchin ihany koa ianao.
Ny fisokafan'ny scuba akaikin'ny nosy
Ny fitsidihan'ny scuba akaikin'ny Pigeon dia mety ho mampitolagaga toy ny fitsirihana. Ho fampidirana feno, azonao atao izany amin'ny torolàlana iray. Ho afaka maneho toerana tsy mahazatra sy ny fauna manontolo ny haran-dranomasina izy, ary manome torohevitra momba ny snorkeling sy ny fisakafoanana mety. Na izany aza, ny vidin'ny fialam-boly toy izany dia ho kely kokoa noho ny saram-pandehanana irery. Rehefa hadinoko ny hadin-tavy sy saron-tava, dia tsy tokony ho sosotra be ianao, satria mety manofa azy ireo any amin'ny nosy (ity dia mazava ho azy fa mila mandoa vola amboniny).
Fa ny diving dia tsy izany irery no azonao atao amin'ny Pigeon. Ohatra, mbola afaka mandentika ny masoandro mamirapiratra ianao, miditra amin'ny fisaintsainana na hijery ny manodidina rehetra. Marina fa tsy azo atao ny misotro ronono tanteraka amin'ny natiora, satria, na dia tsy honenana io nosy io aza, dia mpizahatany maro no mandehandeha isanandro. Mazava ho azy fa vitsy kokoa ny andro amin'ny herinandro raha tsy amin'ny faran'ny herinandro.
Ny vidin'ny fitsidihana ny nosy Pigeon
Ny fidirana mankany amin'ny nosy Pigeon dia karama. Ny vidin'ny tapakila dia voafaritry ny toerana nivarotany azy. Any amin'ny trano fandraisam-bahiny, dia azo vidina amin'ny vola kely izy io. Ny fividianana mora vidy kokoa no hijanona any amin'ny nosy. Amin'ity tranga ity, ny fidirana ho an'ny olon-dehibe dia mitentina $ 15, ary ho an'ny ankizy iray - antsasaky ny sasany. Ho an'ireo vondrona mpizahatany voalamina dia misy fihenam-bidy 20% omena. Eo amin'ny biraon'ny boaty ihany no misy ny fandoavam-bola. Amin'ity tranga ity, ny rupees Sri Lankanes ihany no ekena, ny sandany izay avadika amin'ny tahan'ny fifanakalozana raha arakaraka ireo vola dolara etsy ambony. Pigeon Island dia misokatra amin'ny mpitsidika rehetra amin'ny andro manomboka amin'ny 6 ka hatramin'ny 17.30.
Ny ankamaroan'ireo mpandeha tonga ao Pigeon dia tonga any aminy avy any Trincomalee. Avy amin'ity tanàna ity no mora indrindra eto. Ny safidy tsara indrindra dia ny fitsangatsanganana mini amin'ny lakana kely miala amin'ny tanànan'i Nilaweli (eo akaikin'ny Trincomalee) na ny morontsiraka Uppuveli. Ny halaviran'ny 1,5 km dia afaka mandeha ao anatin'ny 8 minitra fotsiny. Samy miantsambo ny sambo tsirairay aorian'ny famenoana izany amin'ny mpandeha. Ny vidin'ny dia toy izany, manomboka any amin'ny Pantai Nilaweli, dia manodidina ny 3 Sri Lankan rupees tsirairay avy (ao anatin'izany ny saram-pidirana). Azo atao ny fifanarahana mialoha momba ny famindrana. Ohatra, azonao hazavaina raha omena any amin'ny trano fandraisam-bahiny izay nijanonanao io serivisy io.
Weather on Pigeon Island now + forecast
Ity ambany ity ny fantsom-pifandraisana maneho ny toetrandro amin'ny nosy Pigeon ankehitriny. Eto ambany misy marika mampiseho ny toetr'andro ho an'ny andro vitsivitsy mialoha. Ary koa, ny widget dia ahafahanao manova ny sosona ary mandray fampahalalana momba ny rivotra, orana, kotrokorana, onja, rahona sy ny maro hafa.
Pigeon Island amin'ny sarintany
Reviews ny Tripadvisor